Global Voices teny Malagasy · 20 Marsa 2011
20 Marsa 2011
Tantara tamin'ny 20 Marsa 2011
Mediam-bahoaka20 Marsa 2011
Lasa loza iraisan'ny manerantany ny horohorontany tany Japana. Voaporofon'ny fahavononan'ireo vahoaka avy amin'ny firenena sy kantinanta samihafa te-hanampy ireo tra-doza tamin'ilay fihetsehana, izay nahafatesana ain'olona an'arivony maro. Mitatitra ny fandraisana andraikitra anaty aterineto ataonìireo Bolgara i Ruslan Trad.
Karaiba20 Marsa 2011
Androany, 20 Marsa, hamonjy ny biraom-pifidianana ny Haisiana hanapa-kevitra izay ho filohan'ny Firenena Karaiba manaraka. Tsy eken'i Mirlande Manigat sy i Michel Martelly, ireo Kandidà roa heverina ho nahazo ny ampaham-bato be indrindra tamin'ilay fifidianana nahabe resaka notontosaina tamin'ny volana novambra farany teo, moa ity fifidianana anio ity. Ny tatitra...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana20 Marsa 2011
Volabe no nampanantenaina ny Soadiana androany (18 Martsa 2011), taorian'ny teny nataon'ny Mpanjaka Abdulla ho an'ny firenena. Tanatinà teny fohy, ilay Mpanompon'ireo Trano Masina Fivavahana roa dia nisaotra ireo mpisorona, ny mpanoratra ary ny Ministeran'ny Atitany noho ny ezaka nataon'izy ireo hiarovana ny fanjakana. Filazàna sy didim-panjakana avy eo no...
Syria indray no firenena farany isiana fihetsiketsehana lehibe manerana an'i Afovoany Atsinanana (Moyen Orient). Raha tsy nahomby ny fiantsona hihetsika tamin'ny 5 febroary teo, dia nahavory vahoaka an-jatony maro avy amin'ireo tanàna marobe kosa ny fiantsona indray hidina an-dalambe ny 14 martsa, tao anatin'izany ny renivohitra, Damascus sy Aleppo. Raha...
Japana: Mihevitra ny Anton'ny Fiainana
Azia Atsinanana20 Marsa 2011
Navoakan'ny mpaham-bolongana maro izay mihevitra fa izany no tsara atao indrindra amin'izao fotoana izao ny poezia malazan'ilay Poeta Shuntaro Tanikawa "Miaina", izay mandalina ny dikan'ny fiainana.